Sezvo iwe uri munhu, unogona kungova wega webhusaiti yega ή kunyange bhizinesi rebhizimisi rekuInternet kuti iwe unofunga hauna μόνο. Iko kune kukosha mune zvose uye kunyange nzvimbo ine zvinyorwa inobata mamwe marudzi e data. Zvichida zita rekutumidzwa nephasiwedi yaunoshandisa pane dzose dzekombiyuta yako yepaIndaneti; Kana iwe uine bhizinesi duku, webhusaiti yako inomirira mararamiro ako uye mukurumbira, pamwe chete nematoni ehumwe ruzivo rwekukosha huri wega chete, asiwo vatengi vako.
Kana iwe wawana zvinyorwa kubva Forbes, The Economist kana nhamba ipi zvayo yekambani yekuchengetedzwa kweInternet kunze uko nhasi, zvinonyanya kunge iwe unoziva izwi rokuti «Δεδομένα ndiyo itsva Mafuta». Yakava imwe yezvinhu zvisingakoshi zvakanyanya zviripo paIndaneti nhasi (uye saka tinoona kuwedzera kweVPN) uye sechinhu chero chipi zvacho, chinogona kubiwa uye kutengeswa kana kuchinjana.
2.1 Chinyorwa 7 DDoS Kudzivirira Πιστοποίηση SSL. Υποστήριξη Δωρεάν δοκιμή 30 mazuva 30 mazuva 30 mazuva Shanyira paIndaneti: Incapsula.com 3. Cloudflare
Iva nechokwadi chekuti nzvimbo yako yepaiti uye chero zvinyorwa zvese zvauri kuita zviri kusvika. Zvose mapurogiramu anozivikanwa kuvanhu anotasunungurwa nemabhugi uye zvinogona kuitika kuchengeteka. Kunyange izvo izvo zvichengetedzwa zvinongororwa zvichave nezvisungo izvi. Zvose zvinotora ndezvekushaya njodzi uye ma-cybercriminals achakwanisa kuwana. Nokuva nechokwadi chokuti iwe unogadzira zvigadziriswa nguva dzose, mikana yekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekushandisa kushandiswa inoderedzwa..
Kuti utange iwe kubva, edza LastPass, Dashlane ή KeePass. Vamwe vakasununguka, vamwe havasi.
Πιστοποίηση SSL. Υποστήριξη
Δωρεάν δοκιμή 30 mazuva 30 mazuva 30 mazuva
Cloudflare inonyanya kuzivikanwa nemazita seC Network Distribution Content (CDN), iyo inonyanya kukosha iyo yakavaka zita rakasimba mukuchengetedza vatengi masayiti pakurwiswa kwe Διευκρινισμένη άρνηση υπηρεσίας (DDoS). Zvakare, kufanana neIncapsula, Cloudflare mutengo wekutengeserana kwepamusoro pane zvakanyanya kuvharika.